Khuphela imidlalo yasimahla kwi-PlayStation4, indlela yokwenza ngamanyathelo alula | Iindaba zeGajethi
Khuphela imidlalo yasimahla kwi-Ps4, indlela yokwenza ngamanyathelo alula
UPaco L Gutierrez | | ngokubanzi, Videogames
Okwangoku ukudlala imidlalo yevidiyo akubizi ukuba sele sineconsole yangoku, njengakule meko iPlaystation 4, Sinentaphane yemidlalo yeFreetoplay esinokuthi siyityale ngeeyure zokungasebenzi apho sifuna ukuba sekhaya kuphela kunye nefeni okanye isixhobo somoya esixhonywe ngaphakathi Ikhathalogu yemidlalo yasimahla iya isanda kwaye oko kungenxa yokwamkelwa okukhulu abenako luluntu ngokubanzi, ukuya kwinqanaba lokuba ezona zidumileyo phakathi kwabadlali abaqhelekileyo.
Le nto iye yathandwa ngakumbi zii-smartphones apho ekuphela kwemidlalo ephumelelayo yeyasimahla ngokuthenga ngaphakathi nohlelo. Kungenxa yokuba ukudlala simahla, kodwa kusikelwe umda ezininzi. Izithintelo ezisusela kwinani eliqingqiweyo lehlabathi okanye amanqanaba, okanye ngokulula ukuya umxholo wobuhle obongezelelweyo obufana nezixhobo zebhokisi okanye iimpahla ezahlukeneyo. Le modeli yeshishini iye yamkelwa zii-consoles, ifumana iintlobo ngeentlobo zazo kwi-PlayStation 4. Kweli nqaku siza kubonisa indlela yokwenza kwaye zeziphi esizifumana zinomdla kakhulu.
1 Ndifumana phi kwaye ndifumana njani le midlalo kwi-PlayStation 4 yam?
2 Abafana abawayo: Ultimate Knockout
3 Yehlabathi Yeenqanawa Zomkhosi: Iintsomi
Ndifumana phi kwaye ndifumana njani le midlalo kwi-PlayStation 4 yam?
Kulula njengokungena kwivenkile kwaye uye ezantsi kuluhlu apho sifumana khona icandelo "lamahala", ngaphakathi siza kufumana amacandelo ama-3:
Ukuphonononga: Apho singanika khona ukujonga ngokubanzi into eveliswa yivenkile uqobo, Ezi ngcebiso zihlala zitshintsha rhoqo.
Amagqabantshintshi: Kweli candelo siza kufumana owona mdlalo ubalaseleyo womzuzu, okanye lowo ufumene ezona ndaba.
Mahala: Okokugqibela apha siyabona wonke umxholo wasimahla osinikwa yiPlayStation xa uwonke.
Siyakhumbula ukuba nangona le midlalo isimahla, umxholo ongaphezulu esifuna ukuwufumana uya kuhlawulwa. Nangona kunjalo, uninzi lwale midlalo ayifuni iPlayStation kunye, nangona sithanda ukonwabela inani elikhulu lemidlalo ngenyangaNdincoma kakhulu ukuhlawula umrhumo njengoko umgangatho wezi zihloko uphezulu kakhulu.
Abafana abawayo: Ultimate Knockout
Ayisiwo umdlalo wasimahla onje, kuba kuyo imeko yoqobo ixabisa i-19,99, kodwa kulenyanga I-Playstation Plus iyapha, ngokungathandabuzekiyo ngumtsalane ongaphezulu kokwaneleyo ukuvuma ukuhlawula ezo 5 € Rhoqo ngenyanga ixabisa ukudityaniswa.
Yidabi lokulwa lemidlalo emincinci esikhumbuza iinkqubo zamabali zikamabonwakude ezinjengeHumor Amarillo okanye iGrand Prix. Ngokuqinisekileyo kuvakala ngathi kuyonwabisa kwaye kunjalo. Uvavanyo ngalunye luba luhlanga olukhulu lokudlula kuvavanyo ngokukhawuleza, apho Abadlali abangama-60 abakwi-intanethi bakhuphisana ngeenxa zonke ngeenxa zonke ukuzama ukugqiba kuqala kuyo nganye yazo. Kuvakala ngathi iphambene njengoko injalo, kuba ukongeza umbala wayo wokubheja, ubuhle bayo bukhetheke kakhulu kwaye kuyathandeka kakhulu ukuyidlala.
Yehlabathi Yeenqanawa Zomkhosi: Iintsomi
Ukusuka kubadali beLizwe leeTanki, le ndawo yabadlali abaninzi isisa elwandle oluphakamileyo apho siza kuthatha inxaxheba kwimfazwe yomkhosi waselwandle. Iyakusithuthela emfazweni njenge-epic kunye nembali njengeMfazwe yesibini yeHlabathi. Siza kuba neeflegi, kubandakanya abaphathi beenqwelomoya, abonakalisi, iifriji okanye iinqanawa zokulwa.
Ngaphezulu kweenqanawa ezingama-200 zokukhetha kuwo onke amazwe athabatha inxaxheba kwezi mfazwe zingumlo, ngumdlalo wevidiyo owahlukileyo, kuba kukho imidlalo embalwa yevidiyo ebonisa ubunyani obunjalo kunye nokuthembeka kwelo nani leenqanawa zemfazwe. Kumnandi kwaye kunika umdla kubo bonke abathandi beli hlobo.
Oku, njengezinye ii-FTPs ezininzi, kunentlawulo ezithile ezincinci onokufumana kuzo ukongeza ukwandisa ubomi bomdlalo wevidiyo.
Le yeyona nto ingenakuphuthelwa kulo naluphi na uluhlu lwemidlalo yasimahla kwaye oku akunakuba kuncinci, yi-Battle Royale ye-Call of Duty. Lo mdlalo wevidiyo uqinisekisa amava okulwa amakhulu phakathi kwabadlali abali-150. Sifumana Iindlela zomdlalo ezihamba nohlaziyo ngalunye ukuze zinike iintlobo ezahlukeneyo, sinokufumana imo yodwa, ii-duets, ii-trios okanye ii-quartet. Ngaphandle kwamathandabuzo, eyona nto inomdla ngalo mdlalo uyonwabele nabahlobo, kuba ilahlekelwa kuphela yinxalenye yesiseko.
Imowudi royale yidabi kukuzivelela kwezinto ezibonwe ngeBlackout kwi-Black Ops 4, ukufumana ezinye izinto ezinje iGulag, indawo esiya kuphelela kuyo emva kokuba siswelekile kwaye apho siza kulwa nomchasi kwindawo encinci, ophumelele le duel uya kubuyela ebomini ekuhambeni. Sikwafumana imo yoBuotyKule ndlela injongo iya kuba kukufumana eyona mali ngokusebenzisana nabalingane bethu, ukugqibezela imicimbi eyahlukeneyo enjengokubulala iqela lotshaba okanye ukuthimba indawo.
Kule meko sisenzo kunye nevidiyo evulekileyo yeMOO esekwe kwii-voxels, apho sifumana khona izikumkani ezinkulu kwisakhiwo esitshatyalaliswayo ngokupheleleyo kunye nolwakhiwo lwendalo egcwele iintshaba, amakhulu ezinto zokuqokelela, apho sinokufumana ezinye ezenziwe ngabanye abasebenzisi, kunye nemingxuma engenakubalwa yokuphumelela. Siza kuba neeklasi ezili-12 ezinokukhetha kuzo.
Ukuba yonke into enikezela simahla ayonelanga, siya kuba nakho ukufikelela kuninzi lwezinto ezongezelelweyo zasimahla nezihlawulelweyo eSitolo, kodwa uninzi lwazo luya kufikeleleka kuphela ngokudlala.
Ubumnandi obukhulu be isenzo nendima Intsebenziswano apho abadlali abade baya kuphakanyiswa ukuba bazingele izidalwa ezinkulu zentsomi, abanye babo abaziwa ngokuba ziiBehemoth, abemi belizwe elinemibala emnandi eya kuzisa umdlalo wevidiyo ebomini.
Inkqubo yokulwa isikhumbuza eminye imidlalo yevidiyo efana nayo Imiphefumlo emnyama okanye iMonster Hunter. Sinethuba lokudala izixhobo zethu kunye nezixhobo ezikhuselayo ngenxa Inkqubo eyomeleleyo yobugcisa, apho ulwenziwo lubonakala khona.
MMO esekwe kwi-saga ekhawulezayo ye Star Trek, apho siza kuthatha khona umphathi we-federation ye-United Planets, i-Klingon Empire okanye i-Romulans. Siza kujongana nemishini eyahlukeneyo yokuhlola, ukukhusela kunye nokulwa kweenkwenkwezi.
Star Trek Online izakusivumela ukuba senze ngokwezifiso inqanawa yethu ngeendlela ezahlukeneyo zeteknoloji. Siza kuba nakho ukulinganisa umlingiswa wethu kwaye sifumane amandla amatsha okuzikhusela kuwo kwiingozi ezininzi ezisilindeleyo kwindalo iphela.
Siza kuba neendidi ezininzi zeentlawulo ezincinci ukufumana iinqwelo ezidumileyo, nangona uninzi luya kubakho ekufumaneni umdlalo ngokwawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Khuphela imidlalo yasimahla kwi-Ps4, indlela yokwenza ngamanyathelo alula
I-AJAX, inkqubo yakho yokhuseleko epheleleyo
HONOR 9A, inguqulelo yezoqoqosho ebhejayo kwibhetri [UPHONONONGO]